Carbon Monoxide Poisoning (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ်သင့်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Carbon Monoxide Poisoning (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ်သင့်ခြင်း)
Carbon Monoxide Poisoning (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ်သင့်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် (Carbon monoxide )ဟာ အနံ့ရော အရသာပါမရှိတဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ငွေ့တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် ကို ပမာဏ အများကြီး ရှူသွင်းမိခြင်းဟာ အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် ကို ရှူသွင်းလိုက်ရင် သူဟာ သွေးထဲဝင်သွားပြီး ဟီမိုဂလိုဘင် နဲ့ ပေါင်းကာ ကာဗွန်ဆီဟီမိုကလိုဘင် (Carboxyhemoglobin) ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဟီမိုဂလိုဘင် ဟာ အောက်ဆီဂျင်ကို ကိုယ်ခန္ဓါ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သယ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
ကာဗွန်ဆီဟီမိုကလိုဘင် (Carboxyhemoglobin) ဖြစ်သွားရင် အောက်ဆီဂျင် သယ်နိုင်စွမ်းတွေ လျော့နည်းလာပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင် မလုံလောက်မှုဟာ ဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေပြီး သေစေနိုင်ပါတယ်။
Carbon Monoxide Poisoning (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ်သင့်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် ပမာဏအနည်းငယ်နဲ့ ထိတွေ့ခြင်းဟာ မြင်ရလောက်တဲ့ လက္ခဏာတွေ မပြတတ်ပါဘူး။ မပြင်းထန်တဲ့ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ်သင့်ခြင်းဟာ ခေါင်းကိုက်တာလောက်ပဲ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းနဲ့ စိတ်ရှုပ်ခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် ပမာဏ အများကြီး ရှူမိတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သင့်ကို ဒုက္ခရောက်စေပြီး သေစေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်နေစဉ် (သို့) အရက်မူးနေတဲ့သူတွေမှာ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ်သင့်ခြင်းဟာ အခြားလက္ခဏာတွေ သတိမထားနိုင်ခင်မှာပဲ သေစေနိုင်ပါတယ်။
Carbon Monoxide Poisoning (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ်သင့်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လောင်စာတွေ မီးလောင်ကျွမ်းတဲ့အခါ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် ပါဝင်တဲ့ အခိုးအငွေ့တွေ ထွက်လာပါတယ်။ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အိမ်အတွင်းမှာ ပိတ်မိခြင်းဟာ လူတွေနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
Carbon Monoxide Poisoning (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ်သင့်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် ကို ရှာဖွေတဲ့ စက်ကိရိယာကို အိမ်မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး ဘက်ထရီကို ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိရင် သင့်ကို နှိုးနိုင်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ ထားသင့်ပါတယ် (ဥပမာ အခန်းအပြင်ဘက်)။ စက်အသစ်ကို ငါးနှစ်တစ်ခါ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
လောင်စာ လောင်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့ အိမ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ကျွမ်းကျင် ပညာရှုင်နဲ့ နှစ်စဉ် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အိမ်ထဲမှာ သယ်ယူသွားနိုင်တဲ့ မီးမတောက်တဲ့ ဓါတု အပူပေးစက်တွေ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
ရေခဲသေတ္တာက တစ်စုံတစ်ခု စိမ့်ထွက်နေတဲ့ အနံ့ရရင် ကျွမ်းကျင်သူကို ခေါ်သင့်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာက ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် စိမ့်ထွက်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဂက်စ် ကိရိယာ တစ်ခုခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် လုံခြုံမှု ရှိရဲ့လားဆိုတာ အညွှန်းကို သေချာဖတ်ပါ။
ဂက်စ် ကိရိယာ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးမပြုခင် ကျွမ်းကျင်သူတွေကို အရင် ပြသသင့်ပါတယ်။
အိမ်မှာ မီးခိုးခေါင်းတိုင် ရှိတယ်ဆိုရင် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် ပိတ်မိနေခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့ နှစ်တိုင်း စစ်ဆေးပြီး သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပါ။
လေဝင်ပိုက် ပေါက်နေရင် ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ ပြင်ဆင်ပါ။ အိမ်မှာ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် စုပြုံခြင်း မဖြစ်ရအောင် ကပ်တဲ့တိပ် တစ်ခုခုကို အသုံးပြုပြီး မဖာပါနဲ့။
ဂက်စ်မီးဖိုတွေကို အပူရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အသုံးမပြုပါနဲ့။
အိမ်အတွင်းမှာ မီးသွေးတစ်မျိုးမျိုးကို မလောင် ကျွမ်းပါစေနဲ့။ မီးသွေးဟာ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် ပမာဏ အများကြီးကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။
သယ်သွားနိုင်တဲ့ ဂက်စ် မီးဖိုတွေကို အိမ်တွင်းမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
ပြတင်းပေါက်၊ တံခါး၊ လေဝင်ပေါက်ကနေပြီး ၆ မီတာထက်နည်းပြီး (သို့) အိမ်အတွင်း မီးစက်တွေကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
ကားပြင်တဲ့သူကို ကား အိတ်ဇောစနစ် အလုပ်ပုံမှန်လုပ်ပြီး ယိုစိမ့်မှုမရှိတာ သေချာအောင် စစ်ဆေးစေပါ။
ကားကို အလုံပိတ်နေရာတစ်ခုမှာ စက်မနှိုးပါနဲ့။ ကားစက် မနှိုးခင် လေကောင်းလေသန့်ရတဲ့ နေရာမှာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
Carbon Monoxide Poisoning (ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ်သင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Carbon Monoxide Poisoning. https://www.cdc.gov/co/faqs.html. Accessed April 17, 2017.
Carbon monoxide poisoning. http://www.nhs.uk/conditions/Carbon-monoxide-poisoning/Pages/Introduction.aspx. Accessed April 17, 2017.Carbon Monoxide Poisoning. https://www.cdc.gov/co/faqs.html. Accessed April 17, 2017.